Izindaba - Kungani i-Avengers Endgame iqale ukukhonjiswa eChina
Kungani i-Avengers Endgame iqale ukukhonjiswa eChina
Ukukhishwa kokuqala komhlaba wonke kwe- "Avengers: Endgamer" kuseChina, ezinsukwini ezimbili ngaphambi kokukhishwa kwayo eNyakatho Melika, okuwumphumela wokugxila kukaMarvel emakethe yaseChina. Yakha irekhodi langaphambilini lamafilimu eMarvel ezwekazini laseChina, i- "Avengers: Infinity War" kungenzeka ingenise ebhokisini ngaphezu kwezigidi ezingama- $ 800 lapha, okuyisibalo uMarvel angenakungasetshenziswanga kuso.
Okubaluleke kakhulu, inani elikhulu labantu baseChina elihamba phambili kumabhayisikobho linamandla amakhulu eMarvel. Enye yezinhloso ezinkulu zeMarvel Studios ukuthola izethameli eziningi zamaShayina ezazingazi noma zinake ama-movie we-Marvel ngaphambi kokuya ebhayisikobho, ziqale ukubukela iMarvel ama-movie, futhi wazi futhi uthande isiko lama-movie we-Marvel.
Okungafanele kunganakwa, lawa mafilimu imvamisa angokwakamuva ukukhishwa ezwekazini laseChina, okusho ukuthi ingxenye enkulu yemali engenayo ehhovisi lamabhokisi incishisiwe. Akungabazeki ukuthi iChina isibe namandla amakhulu ebhokisini laphesheya imakethe yasehhovisi yamafilimu angaphandle.
Ngisho noStan Lee, ongubaba weMarvel Comics, uzwakalise imizwa efanayo, ethi “iChina izoba yisikhungo sefilimu nethelevishini emhlabeni.” Ngokuqinisekile, uDon usekela isinqumo sakhe ekusebenzeni kwehhovisi lamabhokisi aseChina adlule kanye nokusebenza kwawo inani elikhulu labantu abaya kumabhayisikobho.
Ama-Avengers: i-Endgamer premiere eChina, ngikholelwa ukuthi iMarvel ibona amandla amakhulu eChina Market, nebhokisi laseChina nalo alizange libaphoxe, umdlandla wabalandeli baseChina mkhulu futhi awunakuqhathaniswa, abantu abaningi balandela iMarvel iminyaka eyishumi, Ekugcineni linda impi yezwe yokugcina I, umphumela wesiteshi sokugcina ubukhulelwe usizi, okudabukisa kakhulu kunomfelokazi omnyama, futhi ubelokhu eyiqhawekazi, Kufanele kukhunjulwe ukuthi wafa ekugcineni.
Ngiyabonga kakhulu ngemisebenzi emihle uMarvel ayilethe eminyakeni edlule. Kusivumela thina bantu abavamile ukuthinta izingubo zamaqhawe, singene ezimpilweni zamaqhawe, sizwe injabulo yabo nosizi lwabo, futhi ekugcineni sibusise wonke amaqhawe eMarvel!